5zọ XNUMX iji Instagram Direct na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Zọ 5 iji Instagram Direct na eCommerce
Instagram bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta na etolitela n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke ahụ bụ n'ihi, karịa ihe niile, n'eziokwu na onyonyo ahụ emeriela ederede ahụ, ọ bụ ezie na ugbu a enwere akwụkwọ ndị na-ejikwa ederede ederede emojis. Mana, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ihe ịga nke ọma kasịnụ bụ ọrụ ndị ha webatara, dị ka Instagram Direct.
Ọ dị mma ugbu a Ọ bụrụ n’inwee eCommerce ma ị maghị ihe Instagram Direct nwere ike imere gị, Yabụ nke a masịrị gị n'ihi na ọ bụghị naanị na anyị ga-agwa gị ihe Instagram Direct bụ, mana anyị ga-enye gị ọtụtụ ụzọ iji ya na eCommerce. I ghaghi echebara ya echiche.
1 Kedu ihe bụ Instagram Direct
2 Otu esi eme otu na nkeji ole na ole
3 Etu esi eji Instagram Direct na eCommerce
3.1 Jiri Instagram Direct kpọsaa ngwa ahịa ọhụụ
3.2 Ẹkedori a zoo
3.3 Nanị ahịa ma ọ bụ nkwalite pụrụ iche
3.4 Kwado ajụjụ ma zaa nkata
3.5 Ẹkedori a uru omume
Kedu ihe bụ Instagram Direct
Instagram Direct bụ n'ezie a ọrụ izi ozi nke etinyere na ngwa Instagram. Na mgbakwunye, site na ijikọta ozi nke WhatsApp, Instagram na Facebook, ị nwere ihe niile ugbu a karịa.
Iji ya ị nwere ike izipu ederede, kamakwa vidiyo na foto. Gịnịkwa ka ọ bụ? Ọbụghị naanị iji soro ndị na-eso ụzọ gị kwukọrịta, mana izipu ha ọkwa ma ọ bụ mee ka onye ọ bụla soro gị mara akụkọ ọhụrụ gị n'echeghị ka ha hụ profaịlụ gị na Instagram (ma ọ bụ ka ọ pụta mgbe ha na-eme nchọgharị na Instagram).
Otu esi eme otu na nkeji ole na ole
Iji jiri Instagram Direct, ị ga-achọ naanị nkeji ole na ole na, mgbe ụfọdụ, ọbụnadị nke ahụ. N’ezie, ọ dị ka izigara mmadụ ozi, ihe anyị na-eme ugboro ugboro kwa ụbọchị.
Nzọụkwụ ime otu bụ:
Seta foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo. Can nwere ike ịgụnye ụfọdụ nzacha, mmetụta pụrụ iche ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ.
Ugbu a, pịa "Direct", nke ga-egosi na ihuenyo ahụ.
Akara ma ọ bụ dee aha ụmụazụ ịchọrọ izipu foto ma ọ bụ vidiyo ahụ. N'ezie, ị nwedịrị ike ịme otu otu ihe ịchọrọ ka ị wee zigara ya onye ọ bụla ọfụma na ọsọsọ karịa otu otu.
Ma nke ahụ bụ ya. Ikwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị were foto ma ọ bụ vidiyo dị mma ebe ọ bụ na ogo dị mkpa ọ bụkwa nke ị ga-eji ruo ọtụtụ ndị na-eso ụzọ.
Etu esi eji Instagram Direct na eCommerce
Ugbu a na ịmara ihe Instagram Direct bụ, oge eruola ka o dokwuo anya na ọrụ a nke netwọkụ mmekọrịta nwere ike ịbara gị uru dị ka eCommerce. Ma, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, enwere ọtụtụ ụzọ iji ya iji nweta uru karịa ndị asọmpi gị. Ekwetaghị ya? Lee, lee echiche anyị nwere ike ịgwa gị.
Jiri Instagram Direct kpọsaa ngwa ahịa ọhụụ
Have nwere ngwaahịa ọhụrụ na eCommerce gị? Akwa! Nsogbu bụ na ọ nwere ike ọ gaghị enwe visibiliti ị tụrụ anya ya. Ọ bụrụ na nke ahụ mere gị, kedu maka iji Instagram Direct mee ka ndị na-eso ụzọ mara na ị nwere nke ọhụrụ.
I nwekwara ike nyere ha aka ihu ya dika ihe di nso, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe masịrị ha ma ọ bụ nke na-edozi nsogbu ha nwere. Mgbe ụfọdụ iziga ozi nkeonwe na-ekwu maka ngwa ahịa ọhụụ, ọbụlagodi naanị tupu ịmalite ya, ga-eme ka ha chee na ha dị mkpa karịa n'ihi na ha nwere "onye nyocha" ozi na elele naanị maka ịbụ ndị na-eso eCommerce gị.
Ẹkedori a zoo
Kedụ maka asọmpi naanị maka ndị na-eso ụzọ gị? Mgbe ụfọdụ ibute ndị na-eso gị ụzọ na-enyere aka iwulite iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa. N'ezie, gbalịa ijikọta otu naanị ya na nke ọzọ nke mepere emepe, ebe ọ bụ na, ma ọ bụghị ya, ị gaghị enweta ndị ahịa ọhụụ maka azụmahịa gị.
Otu n'ime Asọmpi ndị a na-ahụkarị maka eCommerce nwere ike ịbụ na ndị ọrụ na-ese foto nke ha site na iji ngwaahịa na ị na-ere ma zigara ya otu. Yabụ, ndị niile na-eme nke a na-abanye ntinye maka mmeri ahụ, ma ị nwere ike ịnwe onyonyo ndị na-eme ka ndị ọzọ hụ na ndị mmadụ na-eji ngwaahịa gị. N'ezie, gbaa mbọ tinye iwu iwu ị nwere ike iji foto ndị ahụ iji kwalite eCommerce gị ma ọ bụ ngwaahịa ndị dị na ya. Nke a ụzọ ị na-ezere nsogbu iwu.
Nanị ahịa ma ọ bụ nkwalite pụrụ iche
Iji maa atụ, chee na Black Friday bịara ma chee na, otu izu gara aga, ịchọrọ belata ngwaahịa, ma ọ bụ nhọrọ ha, iji gbaa ahịa ume. Mana ọ bụrụ 1-2 ụbọchị tupu ị gwa ya ndị na - eso ụzọ gị, naanị, ị na - enye ha ihe kacha mkpa (yana ohere ịzụrụ n'atụghị ụjọ na ngwaahịa ga-agwụ) Nke ahụ na-enyere ndị na-eso gị aka inwe mmetụta dị mkpa maka azụmaahịa gị.
Nwere ike kesaa koodu nkwado ka ị rite uru site na mwepu ego. Ma ọ bụ ịmalite mmemme maka naanị ndị na-eso ụzọ, nke obere awa ma ọ bụ ụbọchị ole na ole, iji gbaa ndị ọzọ ume ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ wee bido inweta uru ndị ahụ.
Kwado ajụjụ ma zaa nkata
Ọ bụ ụzọ ọzọ iji mee ka «ọnọdụ» nke eCommerce gị bịarukwuo ndị na-eso ụzọ nke netwọkụ mmekọrịta a nso. N'ụzọ dị otú a, ị na-enyere ha aka ịchọta azịza nye ajụjụ ndị a na-anụkarị. Ma ị na-enye ohere iji kpọtụrụ gị iji dozie obi abụọ ha, ma ọ bụ naanị gị ma ọ bụ ndị otu ahụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-enye ọrụ nkeonwe na nkeonwe, nke ga-eme ka azụmahịa gị dị ala site n'ime ka ọ bụrụ "n'aka gị nye gị".
Ẹkedori a uru omume
Youtụlewo eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ Instagram na-eso gị bụ mmeri? Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-eme ọtụtụ puku? Ma ọ bụ nde? ECommerce nke gị ga-erite uru na nke ahụ n'ihi na ọ ga-apụta na ị pụtara ìhè. Mana, nke ahụ apụtaghị na ị na-enye ihe masịrị gị na nke ọtụtụ nde mmadụ chọrọ, kamakwa na ị ga-emerịrị lekọta ndị ọrụ ahụ Maka, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịcheghị, "mbọ" ị ga-enye dị ka ma ọ bụ soro gị kwesịrị iweta ụgwọ ọrụ ka, ka oge na-aga, ike agwụ ha.
Ma olee otu ị ga-esi mee nke ahụ? Site na mmemme elele site na Instagram Direct. Naanị ndị na-eso gị na onye ị degaara akwụkwọ ga-erite uru site na mwepu ego, koodu, onyinye na ihe ndị ọzọ.
N'ezie, nke ahụ ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ chọọ ịnọ na otu ahụ naanị ya nwere ike inyere gị aka n'ịre ahịa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Zọ 5 iji Instagram Direct na eCommerce
Kedu otu esi abụ nhazi nke URL maka eCommerce